चर्चित भारतीय कलाकार : कोरोना विरुद्ध कस्को कति सहयोग ? - Rahashya Khabar Online News Portal Rahashya Khabar Online News Portal
चर्चित भारतीय कलाकार : कोरोना विरुद्ध कस्को कति सहयोग ?
प्रकाशित मिति: २०७६ चैत्र १५, शनिबार १३:५५
काठमाडौ १५ चैत्र । विश्व यतिबेला महामारीको रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरस ९कोभिड–१९० विरूद्ध लडिरहेको छ। यसको विरुद्धमा सबैले केही न केही गर्नैपर्ने अवस्था छ।
भाइरसविरुद्ध लाग्न भारतीय मनोरञ्जन क्षेत्रका स्टार कलाकारकारहरू अग्रसर देखाएका छन्। भारतमा २१ दिन लामो लकडाउन घोषणासँगै जनजीवन प्रभावित बनेको छ। यस अवस्थामा भारतीय स्टार कलाकारहरूले आ–आफ्नो तर्फबाट आर्थिक सहयोगको घोषणा गर्न थालेका छन्।
उनीहरूले सरकारले घोषणा गरेको राहत कोषमा आ–आफ्नो तर्फबाट राहत रकम घोषणा गरेका हुन्। यसैक्रममा चर्चित अभिनेता प्रभासले १ करोड रुपैयाँ दिने घोषणा गरेका छन्। उनले एक ट्वीट गर्दै कोरोना प्रभावितका लागि १ करोड दिने घोषणा गरेका हुन्।
त्यसैगरी अभिनेता महेश बाबुले पनि १ करोड रुपैयाँ राहत कोषमा जम्मा गर्ने भएका छन्। त्यस्तै अर्का अभिनेता पवन कल्याणले पनि राहत कोषमा १ करोड सहयोग गर्ने घोषणा गरेका छन्। यसरी संकटको घडीमा सरकारको राहत अभियानमा ठूलो आर्थिक सहयोगसहित उपस्थिति जनाउने फिल्मकर्मीहरूमा राम चरण, एकता कपुर, कियारा आडवाणी, भूमि पेडनेकर, सिद्धार्थ मल्होत्रालगायत छन्।